Home Horyaalka Ingiriiska Maanta oo kale Sanadkii 2000 Rio Ferdinand ayaa noqday daafaca ugu qaalisan...
Maanta oo kale sanadkii 2000, Rio Ferdinand ayaa noqday daafaca ugu qaalisan aduunka kadib markii West Ham ay aqbashay dalab 18 milyan oo ginni ah oo ka yimid Leeds.
Heshiiska ayaa burburiyey heshiis 13 milyan oo ginni ah Roma ka bixisay xiddiga reer Argentina Walter Samuel , iyo mid ka dhacay england oo ahaa 15 milyan oo ginni oo laga bixiyay Alan Shearer iyo Jimmy Floyd Hasselbaink .
Kulankiisii ​​ugu horreeyay wuxuu yimid 2-dii Diseembar oo uu marti u ahaa Leicester waana mid la ilaaway madaama kooxda David O’Leary ay is arkeen 3-0 ka dib nus saac, ugu dambeyntiina waxaa looga badiyay 3-1.
Waxa ay aheyd markii ugu horeysay ee 53 kulan oo Premier League ah oo Ferdinand uu ciyaaray 18kii bilood ee uu joogay Elland Road ka hor inta uusan u dhaqaaqin Manchester United xagaagii 2002.
Ferdinand ayaa kooxda Sir Alex Ferguson kula guuleystay 10 koob oo waa weyn , oo ay ku jiraan lix horyaal oo Premier League ah iyo hal Champions League.
Previous articleJurgen Klopp oo ka hadlay Sababta uu u maqnaanayo Thiago Alcantara kulanka Leicester City
Next articleReal Madrid oo fasaxday mid kamid ah Xidigaha kooxda oo bixitaan dalbaday